Coca tongolo caramel | Recipe ao an-dakozia
Coca tongolo caramel
Faran'ny volana ary kely sa tsy misy ao anaty vata fampangatsiahana? Mila vahaolana haingana sy mora amin'ny famahanana namana tsy voalaza? Tsy misy amin'ireo voalaza etsy ambony ireo… fa tsy te-ho any amin'ny fivarotana lehibe ianao ary manana "hanoanana be"? Roa sy tongolo namana ... mofo sy tongolo. Mbola tsy nahita na nanandrana zavatra mora tokoa ianao naambany vidiny Manao ahoana izy ao coca tongolo caramel, lovia iray izay azo antoka fa ao trano fisakafoanana rififí kisendrasendra izy ireo manindrona anao izay tsy voasoratra ary ity manetry tena zampablogger ento amin'ny latabatrao mihoatra ny € 2.
Na dia ity aza a fomba fahandro hainganaAlao moramora ary omeo minitra vitsy ianao hahitanao tsiro tsirairay ireo nuansa maro izay omen'ny nuansa an'ity fomba fahandro 5 ity: rano, sira, lafarinina, tongolo ary siramamy. Tsy misy frill. Tsy misy fahasarotana
Tsy misy na inona na inona ao anaty vata fampangatsiahana sy ireo vahiny ho tonga? Ity fomba fahandro tsotra sy haingana ary matsiro ity ho an'ny kôka tongolo karamila no famonjena anao sy fanomezana ho an'ny vavonin'ny vahininao.
Ho an'ny faobe coca
Menaka 1 vera
350 gr ny lafarinina (varimbazaha)
Siramamy volontany 3 sotro fihinanana
Tsy mora vita
Afangaroy ny lafarinina 350 gr, rano 1 vera ary menaka oliva sy vera 1 vera mitovy amin'ny lovia iray.
Mametafeta mandra-pivoakan'ny koba mora foana eo an-tanantsika isika (raha miraikitra izy dia tsy maintsy manampy lafarinina mandra-pahatongantsika lafarinina matanjaka sy tsy miova).
Raha vantany vao tratrantsika fa tsy mahazo koba eo anelanelan'ny rantsan-tànantsika isika, dia ataontsika amin'ny tsipika mihodina ary atsofoka mandra-pahatongantsika lovia manify.
Afanaina hatramin'ny 180º ny lafaoro mandritra ny 15 minitra
Mandritra izany fotoana izany dia mamelatra ny koba eo amin'ny lovia misy lafaoro izahay ary manaova fork, manamboatra lavaka amin'ny habakabaka isika (toy ny hataontsika amin'ny mofomamy misy puff).
Naparitakay tamin'ny koba ilay tongolo voatetika
Mamafaza siramamy volontany amin'ny fanampian'ny sotro
Napetrakay tao anaty lafaoro
Miandry 20 minitra eo ho eo izahay (mandra-bolam-bolan'ny koba) ary vonoy ny lafaoro mba hahafahan'ny hafanana sisa tavela amin'ny asa sisa.
Namboly izahay ary vonona!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: firosoana » General » Coca tongolo caramel
Akoho amin'ny labiera
Mini-nougats atody atody